EFOI - Regional :: Hampihaona ireo vehivavy mpandraharaha ny hetsika « Festival de fibre naturelle » • AoRaha
EFOI – Regional Hampihaona ireo vehivavy mpandraharaha ny hetsika « Festival de fibre naturelle »
« Vehivavy matanjaka sy mendrika ho an’ny fampandro­soana maharitra ». Io no tarigetran’ny EFOI Madagascar, na ireo vehivavy malagasy mandraharaha eto anivon’ny ranomasimbe Indiana. Mikarakara hetsika lehibe izy ireo, izay haharitra efatra andro etsy amin’ny tranoben’ ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny, Anosy.
“Festival de fibre Natu­relle”, no anarana nomena an’ity hetsika ity, izay hampihaonana ireo vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara sy ny eo anivon’ny faritry ny ranomasimbe Indiana io. Manomboka anio ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 13 oktobra ho avy izao izany. Hisy tranoheva maromaro hampirantiana ireo vokatra azo avy amin’ny biby na zava-maniry misy “fibre”, toy ny rofia, hoditra…, izay saha­nin’ireo mpikambana eto Madagasikara. Hitondra ny traikefany ihany ao anatin’ izay ihany koa ireo vehivavy vahiny, avy any amin’ireo nosy rahavavy La Réunion, Seychelles, Comores ary Rodrigues, izay nasaina manokana ho avy eto Madagasikara.
Mialoha izany anefa dia efa nisy ny fihaonambe, natao teny Andraharo, niarahana tamin’ireo mpandrindra nasionaly isak’ireo rantsa­man­gaikan’ny Efoi any amin’ ny faritra miisa roa amby roapolo.
“Mahatratra dimanjato ankehitriny ireo vehivavy mpandraharaha mivondrona ao anivon’ny Efoi Madagasi­kara. Nakana solontena roa avy isaky ny rantsamangaika izy ireo mba hofanina ho mpitarika. Nomena sehatra ihany koa ireo mpandraha­raha tanora mba hahafahan’izy ireo mampiroborobo ny fandraharahana ataony”, hoy Rakotondrainivonona Emilie, filohan’ny fikambanana.
Ankoatra izay, nisy ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny EFOI Madagascar sy ny Eddev, ho fiaraha-miasa
amin’ireo vehivavy mpandraha­raha ireo amin’ny fitsinjovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra.
Mety hahaliana anao
Orinasa hamokatra fanafody Manomboka mitady mpiasa ny Pharmalagasy
Fampidiram-bola Orinasa telo amby sivifolo nisitraka sahady ny tosika “Miarina”
Tsindrio eo raha hamela hevitra
Inona no hevitrao?
Fampandriana fahalemana :: Nosoloina ireo lehiben’ny Tafika mpampandry tany rehetra
Fiparitahana laza adina bakalôrea :: Nosamborina ireo mpahay kajimirindra miisa sivy sy mpandrindra ankapobeny iray
Fijoroana vavolombelona Mpitsabo sady minisitra teo aloha voan’ny Covid-19 koa
Fandikana fepetra amin’ny fitaterana Mpamily valo amby dimampolo nampidirina fonjakely
Voina teny an-dalana Lehilahy may niaraka tamin’ny môtô
Tsidiho koa :
Copyright © 2018. AoRaha.